यस कारण अधुरो नै रहने भयो खानेपानीमन्त्री बिना मगरको मेलम्चीको पानी राजधानीमा ल्याउन,हेर्नुहोस! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
यस कारण अधुरो नै रहने भयो खानेपानीमन्त्री बिना मगरको मेलम्चीको पानी राजधानीमा ल्याउन,हेर्नुहोस!
एक वर्षअघि ९७ प्रतिशत काम सकिएको भन्दै प्रचार गराइएको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी राजधानी ल्याउन अझै कम्तीमा ६ महिना लाग्नेदेखिएको छ ।खानेपानी मन्त्रालयको काम नगर्ने, प्रचारवाजी मात्रै गर्ने गलत शैली र डिजाइन भन्दा फरक सुरुङको ढोका निर्माण गरेपछि समय झनैपर धकेलिएको हो ।आयोजनाका अनुसार गत असारको अन्तिम साता पानी परीक्षणका क्रममा भत्किएको सुरुङको ढोका मर्मत र जडान गर्न कम्तीमा फागुनसम्म लाग्ने देखिएको छ।
त्यसपछि पुनः परीक्षण सकेर पनि सुरुङको प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्न थप समय लाग्ने आयोजनाका प्रवक्ता तथा उपकार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठ बताउनु हुन्छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार कात्तिकसम्ममा ढोकाको काम सकेर मंसिरमा परीक्षण सुरु गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाले दिएको ।
जानकारीअनुसार परीक्षण सुरु गरेपछि पनि कम्तीमा २ महिनापछि मात्र पानीको सप्लाइ गर्न सकिने छ भने सुरुङमा पानी भरिन दुई साताभन्दा बढी लाग्छ ।
भरिएको पानी फेरि सुकाएर सुरुङ खाली गर्नुपर्छ । खाली सुरुङको अवस्था प्राविधिक विशेषज्ञहरूले जाँच गरेपछि मात्र पानी सप्लाइ गर्न सकिने छ ।
दसैंअगावै राजधानीमा पानी ल्याउने योजनाअनुसार असारमा आयोजनाले सुरुङमा पानी परीक्षण गर्ने क्रममा मुहान नजिकैको ढोका भत्केको थियो ।ढोकाको निर्माण, डिजाइन र जडान भारतीय कम्पनी प्रेसिजन इन्फ्राटेक लिमिटेडले गरेको थियो । खानेपानी मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले चारैवटै ढोकाको डिजाइन र जडान फेर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यहीअनुसार अहिले काम भइरहेको छ । ढोका बाहिर खुल्ने बनाउनु नै सबैभन्दा ठूलो त्रुटि भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । भित्र खुल्ने गरी ढोका डिजाइन गरेर जडान गर्न ।निर्देशन दिए पनि कम्पनीले तोकिएको समयमा काम पूरा गर्ने सम्भावना कम रहेको छ ।सुरुङमा भएको दुर्घटनामा एक जना इन्जिनियरको मृत्यु भएको थियो ।
भने चालक एक जना अझै फेला परेका छैनन। घाइते दुई जना भने निको भएका छन् । टेस्ट’ गर्दागर्दैको अवस्थामा ढोकाको एक भाग पूरै खुलेपछि निर्माण पूरा हुनै लागेको मेलम्चीको डिजाइन र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको हो ।पुनः डिजाइन र जडान गर्नुपर्नेमध्ये अम्बाथान र ग्याल्थुम अडिटको ढोका जडान गरिसकिएको छ । अब सिन्धु र सुन्दरीजलको ढोका बन्न बाँकी रहेको छ ।
स्वीकृत डिजाइन भन्दा फरक ढोका बनाइएकोले सो दुर्घटना भएको थियो । सोही कारण खानेपानीमन्त्री बिना मगर पदमा रहँदासम्म मेलम्चीको पानी राजधानीमा नआउने अवस्था देखिएको हो ।सत्तारुढ नेकपाले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्री मगर कामको आधारमा हटने सूचीमा रहनुभएको छ ।
बुहारीलाई कायम राखेर अरु मन्त्री हटाउन नमिल्ने बाध्यताका कारण अध्यक्ष प्रचण्ड पनि यस पटक जसरी पनि बुहारीको थमौतीमा नलाग्ने ।नेकपाका नेताहरुको भनाईले अवको पुनर्गठनमा खानेपानी मन्त्री मगर रेडजोनमा पर्नुभएको छ ।जस्को कारण मेलम्चीको पानी आफ्नो पालामा ल्याउने मगरको सपना अधुरै रहने भएको हो ।कास्की खबरबाट
Previous वामदेवलाई राष्ट्रियसभा स’दस्यका रुपमा काम नगर्न सर्वोच्चको आयो यस्तो कडा आ’देश,हेर्नुहोस।
Next हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अ’तिक्रमण गरेको छैन :मन्त्री ज्ञवाली,के भन्नू हुन्छ नी तपाईं ?